Round Clasp Container
Uhlobo: Ukuya kwiMicrowavable Round Containers
Igama lemveliso: PP Qhwaba isitya esiRounding esineSiciko
Umthamo: 12oz, 14oz, 16oz, 18oz, 24oz,28oz, 34oz,44oz,52oz
Imibala: elubala, olumhlophe okanye olumnyama kwisiseko, isiciko esicacileyo, samkele umbala olungiselelweyo wesiseko
Inkonzo: I-OEM, iisampuli zasimahla ezinikezelwayo, pls thumela imibuzo ukuze ufumane iinkcukacha
I-Microwavable round bowl iya kufumaneka xa ufuna ukukhenkceza, ukufudumeza okanye ukuhambisa ukutya ezi zikhongozeli zokutya ziwulungele umsebenzi.Ilungele ukusetyenziswa kwe-microwave kunye nesikhenkcezisi, umngxuma womoya kuyilo lwesivalo sikwenza ukuba uvale ngokulula isiciko ngesiseko sesikhongozeli emva kokuzalisa ukutya okushushu.Isikhongozeli ngasinye siza nesaso se-snap-on isiciko esiya kuthi sigcine imixholo ikhuselekile ngelixa ibonelela ngesitywina esikhuselekileyo-esilungele abatyayo abahambahambayo, izinto ezithathwayo okanye naziphi na iindawo zokutyela ezibonelela ngenkonzo yokuhambisa ukutya.
Umbala wesiseko sesikhongozeli esiqhelekileyo simhlophe / sisobala / simnyama, imibala elungiselelweyo iyafumaneka.ngenxa yokuthembeka kwezothutho, ezi zitya ezingqukuva nazo zenza isisombululo esigqwesileyo sokugcina ukutya ngenxa yamandla kunye nokuqina.Kulula ukucoca, zinokuphinda zisetyenziswe ukuqinisekisa ukuba ufumana ukusetyenziswa okuphezulu kuzo - ixabiso elikhethekileyo lemali liqinisekisiwe.
(ilungele kuphela i-MY701-3)
Umngxuma womoya kuyilo lwesiciko
Uyilo lomngxuma womoya kwi-lid, xa ubeka ukutya okutshisayo kwisitya esijikelezileyo, isiciko sinokutywinwa ngokulula ngesiseko, sigweme ukwandiswa.
Ubunzima obufanelekileyo kunye nobunzima;
Gcina Ukutya Kukutsha
Vala ngokuqinileyo ukutya okushushu okanye okubandayo;
Igqwesileyo ekugcineni kunye nokutya okufakwe efrijini okufana neesuphu, iisaladi, iziqhamo, i-snacks kunye nentsalela.
Ukhuseleko itywina uyilo
Wena unako kuphela vula i isiciko ukusuka'qhwaba'indawo, kunenye indawo, ukuqina phakathi kwesivalo kunye nesiseko sesikhongozeli kuhle kakhulu.
Ngaphambili: Uxande Clasp container
Okulandelayo: 4-izahlulo zezikhongozeli zokutya